Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 02
churchages.net » Shona » Zvidzidzo zveBhaibheri » Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 02
Ruka anotiratidza Jesu semunhu akarurama -- Chikamu 02
Ruka aifanira kuzivisa Jesu semunhu akarurama. Saka ruka akataura pamusoro pezviitiko zvinowira vanhu.
Chinhu chinodiwa nevanhu zvakanyanya ipfuma uye nguva dzose haigovaniswi zvakafanana. Muna 2015 America yaive ne 42% yehupfumi hwepasi rese uye nyika yaive pachinzvimbo chechipiri China yaive ne 11%. Nyika gumi dzakapfuma pasi rese ndidzo dzine 84% yehupfumi hwepasi rese. Pane nyika dzingangoite 200 pasi rese dzakapfuma.
Nyika dzakasaririra pasi rese makumi mana dzine dzine 1% yehupfumi hwepasi rese.
Saka nyika 150 dzinogovana 15 % yehupfumi hwepasi rese, dzichipiwa imwe neimwe chikamu chimwechete muzvikamu gumi chepesenti rimwechete.
MuUnited States yakapfuma, 80% yevanhu varimo ine zvikamu 15% zvepfuma. Saka vanhu vazhinji vari panyika varombo. Varombo havana mufaro pamusoro pevashoma vakapfuma vanopedzisira votonga nekudzvanyirira varombo. Sarudzo dzemutungamiri weAmerica dza 2016 dzakashandisa mari inosvika 7000 miriyoni yemadora. Hakuna munhu murombo angakunde sarudzo dzakadai.
Dambudziko risiri kupera panyika ndiko kushaikwa kwekuenzaniswa pakurarama kunokonzerwa nekuzviunganidzira pfuma mumaoko mevashoma kwazvo.
Ruka anotaura zvakanyanya kuvarombo vanova vanhu vakawandisa vacho. Jesu ndiye Munhu wavo. Josefa, akava baba vake vekurera, naMaria vaivewo vanhu vasina chavaive nacho chine musoro. Josefa naMaria, zvisinei nekuva vechitendero, vaive vasina fungidziro yekuti Mesiasi aizozvarwa muBeterehema. Saka Mwari akavaendesa ikoko kupfurikidza kuti Augustus mambo weRoma aidaidzwa kuti Kesari, akati aida mutero nguva iyoyo.
RUKA 2:1 Zvino namazuva iwayo chirevo chakaitwa naKesari Augusto, kuti nyika yose inyorwe mazita.
Josefa murombo aifanira kufamba makiromita anosvika 140 kubva kuNazareta kusvika kuBeterehema. Mudzimai wake aive akakurirwa sezvo aitarisirwa kuzvara vhiki raizotevera. Aizofamba akatasva mbongoro inova isina kusununguka kufamba nayo uye inofamba ichinonoka. Rwendo rwaizovatorera vhiki. Vaizosvika here kuBeterehema asati azvara? Pfungwa iyi yaizovashungurudza vose mukati merwendo. Saka iyi yaive nguva yakaoma kwazvo kuna Maria kuti afambe rwendo. Mbongoro yaizotakura chikafu chevhiki rose, machira kuti vagorara parutivi penzira, nemidziyo yaJosefa yebasa rake rekuveza (makore maviri akazotevera vazivi vekumabvazuva pavakasvika kuBeterehema, mhuri iyi yaive ichiriko saka Josefa aifanira kushanda kuBeterehema kuti ariritire mhuri yake). Paive pasina nzvimbo yembatya dzemwana, kana mubhedha wemwana nezvimwe zvakadaro.
Nei vaiita rwendo rwakaoma kudai? Kuti vanoripira mutero?
Zvakaoma kufunga pamusoro pechimwe chikonzero. Tese takavenga kuripira mitero.
Vaizofamba zvishoma nezvishoma nekuda kwechimiro chaive pana Maria. Vanhu vaifamba nekukasika vaivadarika zvekuti pavakazosvika kuJerusarema dzimba dzekurara dzaive dzazara. Vakazowana pekurara muchidyiro chainhuwa uye maive musina hutsanana.
Zvidyiro inzvimbo dzine tsvina kwazvo, dzakazara ndove yezvipfuyo. Hadzinhuhwiriri zvakanaka. Mwana akazvarwa. Muchidyiro, mate manyoro kubva kunzombe nemombe dzinodya chikafu chemo, ndicho chaivo nhowo dzake. Pakupera kwehupenyu hwake, vanhu vaizomusvipira mate muviri wake wose zvakare. Nei? Ndiye Chingwa cheHupenyu. Hatikwanise kumedza chingwa tisina kuchitsenga nekudaro chinenge chafukidzwa nemate.
RUKA 2:7 Akazvara dangwe rake mwanakomana, akamuputira nemicheka, akamuvanzarika muchidyiro chezvipfuwo, nokuti vakashaiwa nzvimbo mumba mavaeni.
Kwaive kusina nzvimbo yavo. Vaive vasingadiwi. Pakutanga kwehupenyu hwake, Jesu aive kunze kwenzvimbo dzaigara maJuda ezvitendero. Pakupedzisira panguva yekereke yekupedzisira akamira kunze kwemukova wekereke yemaKristu.
Micheka yakasviba iyi yaive masaga akasakara. Micheka inowanikwa chete muzvidyiro masaga matsaru anoshandiswa pakusunga mombe kuti joki risakuvadze mutsipa wemombe. Mombe dzinoshanda nesimba dzinodikitira. Micheka inoshandiswa pamombe inenge izere dikita remombe. Saka Jesu aive akaputirirwa mumicheka yakazara dikita. Vafudzi varombo vakamhanyira kuchidyiro, saka ivo pachavo vaive vainetsvina uye nedikita sezvo “vakauya vachimhanya”. Saka pahuvepo hwake vaive vachinzwa vachitambirika sezvo iye aive akaputirwa mumicheka ine dikita muchidyiro chine tsvina ichi. Jesu anoita kuti varombo vanzwe vachitambirika nekuti akabva pakutanga kwakazvideredza kwazvo. Vana vashoma kwazvo vanoberekerwa munzvimbo dzine hurombo hwakadai.
Pakupedzisira kwehupenyu hwake kwaizovawo nedikita. Aizodikitira ziya rinenge ropa. Nei? Adamu akatadza murango wake waive kuzviitira chiraramo nedikita rechiso chake. Saka dikita remunhu raifanira kusangana neropa raJesu kuti murango uyu usimudzwe uye rimwe zuva, munyika itsva, hakuzovi nekushanda kwakaoma kunodikitirisa.
Ruka anobuditsa pachena kuti Mwari haashandisi nzira dzatinofungira isu vanhu. Ndicho chikonzero nei Mwari haafadzwi nezvitendero zvedu isu vanhu.
Kekutanga uye kamwechete munhorondo yevanhu apo ruzhinji rwevatumwa rwakavonekwa panyika vachirumbidza nekukudza Mwari.
Zvakaitika kupi? Munzvimbo yakasaririra yemiganhu wehushe hweRoma inodaidzwa kuti Paresitina. Kupi muParestina? Haisi nzvimbo yakatsarukana pakutaurwa kwayo. Nzvimbo isingazivikanwe mukati mekaguta aduku kaidaidzwa kuti Beterehema.
Ndivanani vaivepo pachiitiko chinoshamisa chekuita kunoshamisa uku?
Chikwata chiduku chevanhu vasina kudzidza, vaive vafudzi. Kumafuro vaive vasingageze zvakanyanya. Vainhuwa kunge hwai dzavo. Hatina watinoziva pakati pavo. Mazita avo aive asina kufanira kutaurwa nekuti vaingovewo vanhu pasina zvekuti hakuna akakoshesa kuziva mazita avo. Vakava nekutya kukuru, pamberi pemweya unoshamisa.
Saka Ruka anotiudza chimwe chinhu pamusoro paMwari semunhu. Anoita zvinhu nenzira isina kutarisirwa zvachose. Anofuratira zvinhu zvinodiwa nekuitwa kwazvo nevanhu (MaJuda echitendero aive mutembere nemumasinagoge) achivonekwa nenzira inoshamisa kuvanhu varombo vanotambudzika vasina zvavanokonzeresa kana kukosha, uyewo vaive vasina mari. Vari varombo zvekushaiwa zvipo zvekuigira mwana, vaive vakakwanira kunzwa vari mumba chaimo vasingadzingwi nemweya waive muchidyiro. Mwari aive azvipfekedza nyama yemunhu achitangira pakutanga kwaive kusina kutarisirwa zvachose kwakareruka zvekuti akatambirwa nevarombo nevasina kukosha panyika.
Satani aive arasiswa zvakazara. Akafunga kuti Mwari aisazotambisa nguva nekuva muchidyiro uye pakati pevafudzi vaive vasina chiremerera. Vanhu vaviri vaive vasina chavaive nacho Josefa naMaria haana kuvafungira kuti vaive nechekuita muhurongwa hwaMwari. Saka mumaziso ake chiitiko ichi chese chaive chisina chekuita nekuuya kwaMesiasi. Pakasvika Mesiasi zvaizova kuvakuru vezvitendero vakakosha muTemberi uye paizova nekupembera nekubwinya kukuru. Ipapo chete ndipo paizomuka Satani nemweya yake yakaipa kunorwa naye. Satani aive aive arasiswa zvakazara nechiitiko chakapora chakaitwa nevanhu vakareruka avo munharaunda dzinogara vanhu vaionekwa sevasina maturo.
Jesu, Mwana mukuru kwazvo munguva dzese, aive akapoteredzwa muchidyiro nechikwata chemazero vanhu pasina mumaziso enyika.
Nguva yemanhamba yemacomputa nembozhanhare yakashandura hupenyu hwedu. Nguva yemanhamba iyi inorarama nemanhamba maviri 1 na 0.
Kuberekwa kwaJesu, Shoko raMwari aive neShoko nezvese zvemweya zvatinoda, kwakashandura nyika. Ndiye wekutanga, nhamba 1. saka mumwe munhu wese pakuberekwa kwake aizova pasina, zero.
Ruka akataura kuyanana kwenhamba iyi pakati paJesu Munhu sa 1 uye isu tese se 0, pasina.
Nyika yakatipotereda inoda kuti tipimwe (isu, shuviro dzedu, tsika dzemakereke edu, vakuru vemakereke edu, mhuri dzedu, zvinyakare zvedu, mari, mbiri, vakadzi) semanhamba 1 asi zvinotaurwa neBhaibheri sepasina, kana 0.
Tarirai kuti vanhu vanhasi, kusanganisira vanoenda kumakereke, zvishoma sei zvavanoziva muBhaibheri.
RUKA 2:8 Zvino kwakanga kunavafudzi munyika iyo, vaigara kuvuragu vachirinda mapoka avo vusiku.
9 Mutumwa waShe wakamira navo, nokubwinya kwaShe kukavakomba, vakatya nokutya kukuru.
RUKA 2:13 Ipapo kamwe-kamwe kakava’po pamwechete nomutumwa, vazhinji vehondo yekudenga, vachirumbidza Mwari vachiti:
14 Mwari ngaarumbidzwe kumusoro-soro, norugare ngaruve navanhu vaanofarira.
Ruka haana kutaura pamusoro pevazivi. Vakazouya makore maviri akazotevera, vakawana Mwana kwete Rusvava. Vazivi vakapinda mumba, kwete muchidyiro. Jesu naMaria vaivapo, asi hapana kutaurwa nezvaJosefa.
Mateo 2:11 Vakapinda mumba (vazivi vekumabvazuva) vakawana mwana naMaria mai vake; vakawira pasi,vakamunamata; vakasunungura fuma yavo, vakamupa zvipo zvendarama, nezvinonhuwira, nemura.
Vazivi havainzwa vakatambirika zvakanaka muchidyiro chaive chisina kushambidzika. Vafudzi vaive vakadikitira vakanzwa vari mumba chaimo muchidyiro. Vaive vakajaira kunhuhwa kwemhuka.
Saka Jesu, semunhu, akatangira pahurombo hunosiririsa muchiitiko chakaderera zvakanyanya. Saka anokwana zvakanyanya pavarombo, vanova vazhinji murudzi rwevanhu.
Ruka anotaura kuti Jesu akaenda kuTemberi paaive nemakore gumi nemaviri. Maprista akashamiswa neruzivo rwake.
Josefa naMaria vakamusiya vakazodzoka mumashure memazuva matatu vakamuwana muTembere.
RUKA 2:48 Zvino vakati vamuvona, vakakatyamara: mai vake vakati kwaari: Mwana watiitireiko zvakadai? Tarira baba vako neni takakutsvaka tichichema.
49 Akati kwavari: makanga muchinditsvakireiko? Makanga musingazivi kuti ndinofanira kuva pazvinhu zvababa vangu here?
Akapoteredzwa nemaJuda aive akachenjera vaisazotenda mukubereka kwemhandara, Maria akatya akadaidza Josefa baba vaJesu.
Mhinduro yake yaive yekuvagadzirisa uye kuvapa zaruriro, yakaziviswa nehuchenjeri hukuru.
“Makanga muchinditsvakireiko?” Kurairwa kwakadzikama. Angadai akavati, “kana manga muchinditsvaka zvinoreva kuti makabva musina kutarisa kuti handisi pakati penyu. Hakusi kuita kwevabereki kwakanaka.”
Chidzidzo kwatiri ndechekuti tinosiya Shoko raMwari zviri nyore toenderera mberi nehupenyu hwedu nenzira dzisingabvi muMagwaro.
“Makanga musingazivi kuti ndinofanira kuva pazvinhu zvababa vangu here? Kubvunza kwakachenjera. Angadai akavati, “Ko munotyeiko pavanhu ava zvekuti munoviga kuberekwa kwangu nemhandara.”
Zvaakataura zvaireva kuti dai Josefa aive baba vake aizova ari pamwe naJosefa achiita mabasa ekuveza naye. Asi kana Mwari vaive Baba vake, aizova muTembere yaMwari achitaura nevaprista nanachiremba. Nekuti akanga agara mazuva ese matatu muTembere, Jesu aive agara mumba mababa vake. Saka Baba vake chaivo, Mwari, vaive vasina kumusiya kwemazuva matatu sekusiiwa kwaaive aitwa naJosefa, aive asiri baba vake chaivo.
Saka nenzira iyi Jesu akapupura kuberekwa kwake nemhandara nekushinga kukuru pamberi pevanhu vakakosha vaisazotenda kutaura uku. Hutsinye hwavo ndihwo hwaityiwa naMaria kuti asataure chinhu ichi. Saka tinodzidza kuti nguva ichauya yekuti tinofanira kumiririra chokwadi chemuBhaibheri chinopikiswa nevakuru vemakereke. Tichava nehushingi hwekupikisa nekuvaudza zvinhu zvavasingadi kunzwa here?
Jesu akaita mhinduro yaive yakangwara zvekuti akagadzirisa Maria pakukanganisa kwake asina kuzviburitsa pachena kuti aimugadzirisa. Ndiro ruremekedzo rwaaive narwo kuna Maria. Uyu waaive mufananidzo chaiwo kuvana vanozvidza, vasingaremekedze, uye vanomhura vabereki vavo.
RUKA 2:51 Ipapo akaburuka navo, akasvika Nazareta, akavaterera. Mai vake vakachengeta mashoko iwayo ese mumoyo mavo.
Pano Ruka anotipa chidzidzo chakakosha. Kana munhu achida kuteererwa nevanhu, anofanira kudzidza kuteerera mirairo iye pachake. Saka Jesu akararama makore ehukomana akaoma nekuteerera Josefa naMaria asina kubvira arega kuvaremekedza. Muenzaniso wakanakisa. Izvi zvakamuita kuti ave akakwanira kuudza vamwe zvekuita paaizokura abuda mumba maJosefa naMaria.
VAKOROSE 3:20 Vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti ndizvo zvakanaka munaShe.